Soomaali Tahriib ah oo Qaarna ku Geeriyoodeen Saxaraha Liibiya, Qaar Kalena Xiranyihiin Xabsiyada Suudaan
Wararka Somalitalk ka soo gaarey dalka Suudaan ayaa sheegay in dad soomaali ah oo tahriib ah ay qaarna ku geeriyoodeen saxaraha liibiya qaar kalena ay kujiraan xabsiyada wadankaan sudan halka qarkalena ay dhameeysteen waqtigood lagu xakumay oo ahaa 3bil kadib damiin eey kusoo daayeen somalida wadankaan.
Warkaan oo Faahfaahsan iyo Maxamad Amiin oo Suudaan Jooga waraysi uu layeeshay gudoomiyaha jaaliyada somaliyeed ee sudan lasoco... insha Allah, waxaan soo tebineynaa marka uu nasoo gaaro.
ISHA: Maxamad Amiin (suxufi Soomaaliyeed oo jooga Suudaan)
SOMALITALK | March 14, 2002
Wargeys Kasoo Baxa Minnesota oo Qoraal Dheer Ka Qoray Musharaxii Hore ee Duqa magaalada Minneaplis, Maxamuud Nuur Wardheere
Maxamuud Wardheere iyo gabadhiisa 4jirka ah ee Maryan
Wargeyska lagu magcaabo "Southwest Journal" ayaa cadadkiisii maanta qoraal dheer ka qoray Maxamuud Nuur Wardheere oo ah musharaxii hore ee duqa Magaalada Minneapolis.
Maxamuud Wardheere waa Soomaaligii ugu horeeyeye ee Magaalada Minneapolis isu tooga doorashada duqa Magaalada, taas oo uu ka qayb galay sannadkii lasoo dhaafay.
Wardheere waxa uu hadda deggan yahay magaalada Minneapolis, ee gobolka ay Soomaalidu ku badan yihiin ee Minnesota oo ku yaal bartamaha dalka maraykanka.
Warkii wargeyska oo faahfaahsan ka akhri Halkan